त्यागिएका संसारका ८ डराउने शहरहरु - kageshworikhabar.com
त्यागिएका संसारका ८ डराउने शहरहरु
१. क्राको, इटाली
दक्षिणी इटालीको यो सानो शहर आठौं शताब्दीमा स्थापना भएको थियो। यसको गौरवको दिनमा शहरमा करीव १,५०० मानिस बसिरहेका थिए, तर १९६० औँ शताब्दी को शुरुदेखि उनीहरू बिस्तारै आफ्नो घर छोडेर गए। १९६३ मा, पहिरोको कारण नागरिकहरू खाली गरियो। दस बर्ष पछि, त्यहाँ बाढी आएको थियो, त्यसपछि भूकम्पको एक श्रृंखला, र शायद केहि सलहहरू भीडहरू थिए। १९८० औँ शताब्दीको दशकदेखि कोही पनि क्र्याकोमा बसोबास गरेनन् तर पर्यटकहरू वर्जिन मरियमको मूर्ति हेर्न सबै समय शहरको भ्रमण गरिरहेछन् जुन प्रकोपहरूले अझै कुनै किसिमले छोएन।
२. टेर्लिङ्गुअ , टेक्सास
१९०३ मा टेर्लिङ्गुअको जनसंख्या ३००० बाट घटेर २०१० मा ५८ पुगेको थियो। शहर सिन्नबार खानी कलनीको रूपमा शुरू भयो, तर अहिले यहाँ खाली घरहरू र केही परिवारहरू मात्र पाउन सकिन्छ। उनीहरु धुलो चर्च र फार्महरूमा सजिलो यात्रा गर्दै छन्।
३. प्रियप्याट, युक्रेन
किभबाट ९४ किलोमिटर टाढा अवस्थित युक्रेनको प्रियप्याट शहर सम्भवतः विश्वको सबैभन्दा प्रख्यात भूत शहर हो। ३० बर्ष भन्दा पहिले भएको चोरनोबिल आणविक पावर प्लान्टमा विस्फोट हुनु भन्दा पहिले ५०,००० मानिस बसोबास गर्थे। खाली प्रिप्याट खाली स्कूलहरू, खेल मैदानहरू, अस्पतालहरू, इत्यादिको लागि कुख्यात छ, जहाँ सबै चीजहरू अप्रिल २६, १९८६ देखि यता अडि रहेको छ।
४. हशिमा टापु, जापान
नागासाकीबाट १५ किलोमिटर दूर हशिमाको भूत टापु अवस्थित छ, जहाँ १८८१ मा there,५,००० स्थानीयहरू पानीमुनि कोइला खानीमा काम गर्थे। आधिकारिक परिदृश्यका अनुसार, बाहिर निकाल्नको लागि केही नभए सबैले आफ्नो घर छोडे। खानीमा कम गर्नेहरुलाई सहयोग पुर्‍याउन धेरै सुविधाहरू निर्माण गरिएको थियो। अहिले ती सबै पर्यटकहरू आउने प्रतीक्षामा, परित्याग भइरहेका छन्।
५. कोलम्यानस्कोप, नामिबिया
अफ्रीकी मरुभूमिमा एक डराउने भूत सहर छ जसलाई कोल्म्यानस्कप भनिन्छ। सन् १९०० को शुरुमा, यो विश्वको सबैभन्दा ठूलो डायमन्ड खानीहरू मध्ये एक थियो र तसर्थ, मानिसहरूले रेष्टुरेन्टहरू, क्यासिनोहरू, बलिङ गल्लीहरू लगायतका निर्माण गरे। यद्यपि, “हीरा साम्राज्य” चाँडै नै ध्वस्त भयो र बालुवाका देवताहरूको लागि शहर छोडेर सबै घरहरू र सुविधाहरू त्यागे।
६. रस टापु, भारत
उष्णकटिबंधीय टापुमा बस्नु भनेको वास्तविक हूट हुन सक्छ जबसम्म अनन्त प्राकृतिक प्रकोपले जनसंख्यालाई मार्दैन। एक पछि अर्को, आँधीबेहरी, सुनामी, पहिरो र प्राकृतिक आश्चर्यका चीजहरूले नागरिकहरूलाई हटाउँदै गयो। जे होस्, पुराना भवनहरू जस्तै घरहरू, चर्च, अस्पताल, र अन्य,१७ औँ – २० औँ शताब्दीमा निर्मित, अझै जंगलमा राम्ररी संरक्षित छन्।
७. रायोलाइट, नेभाडा
पछिल्लो शताब्दीको सुरूमा, राइओलाईट सुनको ज्वरोबाट पीडित सबैका लागि मक्का थिए। अब यो हावा र बालुवाको शहर हो, र कहिलेकाँही पर्यटकहरू कहिले काँही एकपटक आउँछन्। यी पाहुनाहरूलाई एक अनौंठो शिल्प द्वारा अभिवादन गरिएको छ: मरुभूमिको बीचमा पेन्ग्विनको साथ चलिरहेको एक खनिक। यहाँ अवधारणा के हो? जे भए पनि, मूर्ति हेर्ने मात्र कुरा होइन। बोतलले बनेको अद्भुत घर नभुल्नुहोस्!
८. थरमन्ड, वेस्ट भर्जिनिया
वेस्ट भर्जिनियाको थर्मान्ड शहर १८०० मा स्थापना भएको हो। दुई सय वर्ष पछि, २००० मा, यसलाई परित्यागको रूपमा सूचीबद्ध गरिएको थियो, तर पुरानो रेलवे, घने जंगलले घेरिएको, अझै शहरको मुख्य पर्यटक आकर्षणको रूपमा बलियो रहेको छ। यदि तपाईले एउटा फेला पार्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले अझै पनि लोकोमोटिभ चढ्न सक्नु हुनेछ।
Previous articleसिमेन्स इनर्जीले सात हजार ८०० कर्मचारी हटाउने तयारी
Next articleभारतमा दैनिक सङ्क्रमितको सङ्ख्या छ महिनापछिकै न्युन